FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA VIZSLA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Vizsla
Illie the Vizsla
Lisitry ny alika mifangaro Vizsla mifangaro
Alika manondro volo fohy Hongroà
Rovidszoru Hongariana Vizsla
Alika fihazana antonony ny Vizsla. Somary lava kokoa noho ny halavany ny vatana matanjaka. Ny karan-doha somary domedina dia mahia sy hozatra ary malalaka eo anelanelan'ny sofina miaraka amin'ny tsipika medaly midina amin'ny handrina. Ny savaivony dia miandalana manomboka amin'ny fijanonana ka hatrany amin'ny orona ary mitovy ny halavany na fohy kokoa noho ny karandohany. Miloko nofo ny orona mifanohitra amin'ny palitao. Matanjaka ny hatoka tsy misy savony. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso salantsalany dia mifanohitra amin'ny lokon'ny palitao. Ny sofina lava dia mahia manify, manantona akaiky ny takolaka misy tendrony boribory. Ny rambony dia matevina amin'ny fotony ary ampitaina amin'ny 2/3 ny halavany tany am-boalohany. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking amin'ny ankamaroan'ny faritra Eropa. Ny tongotra eo anoloana dia mahitsy miaraka amin'ny tongotra toy ny saka. Esorina matetika ireo lalandara. Ilay palitao fohy sy malama dia tery amin'ny vatana iray manontolo ary tonga amin'ny loko volamena-harafesina amin'ny alokaloka isan-karazany amin'ny vatana.
Ny Vizsla dia maneho hevitra, malefaka ary be fitiavana. Tsara sy mora ampiofana amin'ny ambaratonga avo, mila fanentanana ara-tsaina isan'andro. Mila tanana marary sy milamina ary mafy orina izy io. Raha tsy mahita anao ho olom-pahefana matanjaka io karazany io dia ho lasa maditra. Azo atokisana amin'ny ankizy, tia milalao mandritra ny ora maro. Raha tsy misy fanatanjahan-tena isan'andro dia mety ho mavitrika sy mahaliana ho an'ny ankizy mbola kely ireo alika ireo, saingy tsara ho an'ny ankizy mazoto. Afaka mampifanaraka haingana amin'ny fiainam-pianakaviana, ary amin'ny alika hafa dia tsara amin'ny ankapobeny. Tena mpanao fanatanjahan-tena izy ireo, ary rehefa tsy ampy fanatanjahan-tena dia mety ho lasa manimba na neurotic. Araraoty tsara izy ireo amin'ny olona, ​​toerana, tabataba, alika SY biby hafa . Tena zava-dehibe ny fanazarana ny fankatoavana ny Vizsla anao. Raha tsy misy fanatanjahan-tena ampy dia mety ho dodona loatra izy ireo, mandehandeha manodidina anao amin'ny fientanam-po. Ity karazana ity dia tena afaka ampiofanina ary vonona ny hampifaly tokoa - raha azonao atao ny mahatakatra tsara izay tadiavinao azy ireo. Raha tsy mampiofana an'ity karazana ity ianao dia mety ho lasa sarotra ny mifehy sy mifehy. Ohatra: Jereo ny lahatsarin'ny Vizsla mila fanatanjahan-tena bebe kokoa. Mariho fa tena maniry fatratra ny hampifaly ilay alika izy, kanefa izy dia nanatanjaka angovo bebe kokoa noho ny fantany izay hatao. Mazava be fa adin-tsaina izy ary tsy milamina. Vizslas mazàna mitsako . Ity karazany ity dia tsy natao ho an'ny rehetra. Raha mila alika milamina ianao ary tsy te handeha an-tongotra kilometatra roa na mihazakazaka iray kilaometatra isan'andro, aza misafidy Vizsla. Raha tsy misy fanatanjahan-tena mety dia mety ho lasa olona avo lenta izy ireo. Manana talenta maro izy ireo toy ny: fanarahana, fakana, fanondroana, mpiambina ary fankatoavana mifaninana. Alika mpihaza ny Vizsla ary mety tsara amin'ny saka notezaina azy ireo, saingy tsy tokony hatokisana biby toy ny hamsters , bitro SY kisoa ginea sns. Alao antoka fa ho alikao foana ianao mpitarika fonosana hialana amin'ny fihetsika ratsy toa ny fanaka miambina , sakafo, kilalao sns. Vizslas mahay mandanjalanja izay mahazo fanatanjahan-tena ampy ary manana tompona izay tena mpitondra entana dia tsy hanana ireo olana ireo. Ireo fihetsika ireo dia azo averina rehefa manomboka mampiseho ny fitarihana, fifehezana ary manome fanatanjahan-tena ampy ny tompony, na ara-tsaina na ara-batana.
ohatrinona ny kisoa ao anaty vilany?
Haavony: Lehilahy 22 - 26 santimetatra (56 - 66 cm) Vehivavy 20 - 24 santimetatra (51 - 61 cm)
Milanja: Lehilahy 45 - 60 pounds (20 - 27 kg) Vehivavy 40 - 55 pounds (18 - 25 kg)
Mora voan'ny dysplasia.
Boxer alemà mpiandry ondry Mix toetra
Ny Vizsla dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Izy io dia mavitrika mavitrika ao an-trano ary manao tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny.
Alika miasa mahery io ary manana tanjaka lehibe. Mila raisina izany dia an-tongotra isan'andro, lava, haingana na jogging. Mahatonga mpiara-mandeha bisikileta na mpitaingina bisikileta tsara izy io. Ho fanampin'izay dia mila fotoana be dia be ny fihazakazahana, indrindra ny fikatsoana amin'ny faritra azo antoka. Raha avela mankaleo ireo alika ireo, ary tsy mandeha na mihazakazaka isan'andro, dia mety hanjary manimba izy ireo ary manomboka mampiseho olana isan-karazany amin'ny fitondran-tena.
Ity palitao malama sy lava volo ity dia mora hitazonana ny toetrandro avo indrindra. Borosio amin'ny borosy borosy mafy, ary ny shampoo maina indraindray. Mandroa amin'ny savony malefaka ihany raha tsy ilaina. Tokony hohaingoina ny hoho. Ireo alika ireo dia mpandatsa-dra.
Vizslas dia aseho amin'ny etchings izay nanomboka tamin'ny taonjato faha-10. Avy any Hongria izy ireo nateraky ny Magyars, izay nampiasa azy ireo ho toy ny alika mpihaza. Izy ireo dia heverina fa avy amin'ny karazana tondro maromaro miaraka amin'ny Tran Pennsylvaniaian Hound ary ny Alika mavo Tiorka (izao lany tamingana ). 'Vizsla' dia midika hoe 'tondro' amin'ny hongroà. Ireo alika dia niasa toy ny mpihaza, ny orony faran'izay tsara ary ny angovo tsy manam-petra no nitarika azy ireo hahay hihaza lalao any an-toerana toy ny vorona sy bitro. Saika lany tamingana io karazany io taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Taorian'ny ady, rehefa nifehy an'i Hongria ny Rosiana, dia natahotra ny hanjavona tsy hiteraka intsony ny karazany. Tamin'ny fikasana hamonjy ilay karazana dia nanondrana an-tsokosoko ny sasany amin'ireo alika tany Amerika sy i Austria ireo Hongroà teratany. Ny Vizsla dia manana zanak'olo-mpiray tam-po aminy, ny iray manana wirehair mafy antsoina hoe Wirehaired Retriever ary ny iray kosa Vizsla efa lava volo. Ny lava volo dia mety ho teraka amin'ny litters malefaka sy wirehair, na dia tranga tsy fahita firy aza izany. Ny Vizslas lava volo dia tsy voasoratra anarana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, fa ny sasany kosa dia hita any Eropa. Ny sasany amin'ireo talentan'i Vizsla dia misy retriever, pointer, mpihaza vorona lalao, fifaninanana fankatoavana, hakingana ary mpitily.
Shih Tzu sy Jack Russell
Alika Vizsla olon-dehibe - Sary natolotry ny David Hancock
'Ireto ny sary nalainay tamin'ny zanakay Patiz Vizsla fony izy telo taona mahery. Miaina mifanaraka amin'ny anaram-bosotra 'Versatile Vizsla' izy. Velona izy haka any an-tanety sy any anaty rano, ary tiany ny manara-maso dummy misy hanitra papelika. Tena mora nampiofana izy. Noho io antony io dia mieritreritra ny hifaninana amin'ny fitsapana fankatoavana izahay ary hitazomana hatrany ny fahafinaretana.
'Fa hendry be izy ka mila miantoka fa tsy miasa ho an'ny fitsaboana tsotra fotsiny izy. Izy no alika voalanjalanja indrindra ao amin'ny manodidina . Raha tsy misy fanatanjahan-tena sy faharetana ary fampiofanana hentitra, na izany aza, tsy mino izahay fa hijanona toy izany izy. Zava-dehibe ny ho mpitarika kitapom-batsy. Raha tsy izany dia handehandeha eraky ny vadiko aho ary mifidy izay baiko harahina araky ny fahalalany azy.
Cocker spaniel sisin-collie Mix
'Mandeha / mihazakazaka Patton farafahakeliny 45 minitra isa-maraina isika, orana na mamirapiratra. Manome fotoana azy 'mihaza' koa isika rehefa apetrakao amin'ny tariby fanamarinana 20 metatra haka sy hanaraka. Izany dia manome azy fotoana be fofona amin'ny faran'ny fanazaran-tena mahazatra, ary mamela antsika hiasa amin'ny volavolany sy ny volombolony ihany koa. Ny fikitihana ny instincts-ny karazany dia mitazona azy ho afa-po. Azonao atao ny mahita ny fanoloran-tena sy ny tanjona amin'ny asany rehefa miasa izy.
'Isaky ny hariva dia mandeha any an-toerana izy zaridaina alika , izay izy dia ampahany amin'ny fonosana alika mahazatra sy maharitra. Ny fitambaran'ny fampihetseham-batana, ny fanofanana ny fankatoavana ary ny fiaraha-monina dia nanakana ny fitondrantena ratsy amin'ny fampandrosoana.
'Tadidio foana: Vizsla reraka dia Vizsla falifaly. Mila mihazakazaka sy mandehandeha izy ireo. '
Gunner the Vizsla manondro
Illie the Vizsla miandry ny baikon'ny tompony
Ity dia mpikomy amin'ny Rousing Digger an'ny Rate aka Digger.
Toby ilay alika kely Vizsla amin'ny 11 herinandro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Vizsla
Sary Vizsla 1
Sary Vizsla 2
Sary Vizsla 3
Sary Vizsla 4
Alika Vizsla: sary an-tsokosoko voaangona
maninona no mivadika volontany ny orin'ny alika
beagle rottweiler afangaro amidy
mena sy ny fotsy Siberia husky
pyrenees mahafinaritra sy fifangaroan'ny alika tendrombohitra bernese
sarin'ireo retrievers volamena kely